Guri Guri & Diraangiyo mobilkaaga oo dhan: Dagaalyahannada Waterdeep | Androidsis
Dagaalyahannada Waterdeep waxaa laga heli karaa Play Store iyadoo leh soo dhaweyn weyn by gamer dadweynaha ka Android ah. RPG oo leh oggolaanshaha inuu yahay Dungeon & Dragons, in kasta oo ay ka fog tahay waxa qofku filan karo, gaar ahaan markaan haysanno aasaaska cayaaraha doorka sida aan u fahamno.
Sheekadu waxay noo geynaysaa Waterdeep, oo ah magaalada ugu weyn xeebta Seef oo ay ku hanjabeen xoogag awood badan. Laakiin nasiib wanaag waan awoodnaas ku caawi iyaga markii ay u yeeraan Laeral Silverhand isla markaana loo maro wadada cadawga doonaya inuu gaaro irdaha magaalada.
1 Laakiin isagu naftiisa ayuu u ogolaanayaa inuu ciyaaro, in kastoo calaamadaas ...
2 Dagaal fudud oo taabashadaas gaarka ahi ka maqantahay
3 Asalka guddiga
Laakiin isagu naftiisa ayuu u ogolaanayaa inuu ciyaaro, in kastoo calaamadaas ...
Dhibaatada goorta waxaad xirataa sumadda Dungeons & Dragons waa in wax walba laga sugaa. Sugitaanka wax walbana waxay la micno tahay maadaama aadan la kulmin wixii laga filanayay, niyad jabku wuxuu u eg yahay inuu daadad galiyo taageerayaasha noocyada, sidaas darteed dib u eegista xun waxay bilaabaan inay midba midka kale u dhacaan
Haddii Dagaalyahannada Waterdeep ay ahaan lahaayeen ciyaar kale magac kale Waxaan kuu xaqiijin karnaa inay dhibco fiican ku yeelan lahayd Play Store, laakiin waa waxa ay tahay. Cinwaan cusub oo loogu talagalay Android oo muujinaya waxqabad farsamo oo wanaagsan, in kasta oo ay ka maqan tahay bartaas gaarka ah ee lagu kicin karo.
Waxay ku saleysan tahay dagaalka oo salka ku haya iyo sanaadiiqda bililiqada taasi waxay na siin doontaa waddo aan ku horumarin karno geesiyaasha kala duwan ee aan soo ururin doonno. Taasi waa, waxaan ka hadleynaa freemium saafi ah kaas oo aan ugu baahanahay sanduuq si aan uheli karno qadaadiic, hub iyo waxyaabo kale oo badan.
Dagaal fudud oo taabashadaas gaarka ahi ka maqantahay
Maxaa dhacaya haddii aad ku faani karto waa cadawyo kala duwan oo aan ka heli doono heerar kala duwan. Waxaan haynaa camaaliyiin cadaan ah, kuwa aan wali dhalan iyo kuwa hobgoblinska xun oo aad noogu adkayn doona. Dagaalku wuxuu ku saleysan yahay in la yeesho laba ficil oo la sameeyo: dhaqdhaqaaq iyo weerar. Cadawga waxaa lagu soo saari doonaa sabuuradda si aan ugu dhaqaaqno inta aan weerareyno oo aan isdifaaceyno.
Marka aan ka gudubno heerarka ugu horreeya ee aan awoodno furid geesi cusub. Nasiib wanaag waxaan heysanaa fursad aan ku kala doorano labo, sida ku dhacda isla heerarka ka dib cadawga ugu horeeya, waxaan wajihi doonaa xulashada bidix ama midig. Maaha inay beddeli doonto mawduuca guud ee sheekada, laakiin ugu yaraan waa noocyo kala duwan oo noocyada cayaaraha ah.
Waa inaan sidoo kale horumarinno mid kasta oo geesiyaasheena ah. Wax fudud maadaama laynoo tilmaami doono tilmaamayaashaas dhalaalaya taasi waxay inaga dhowreysaa inaan waqti lumino. Uguyaraan malaha weerar toos ah sida ay ugu dhacaan ciyaaraha kale ee boorashka. kuwaas oo u sii fidaya sidii xumbada oo kale.
Mid ka mid ah qodobbada aan jeclaannay Dagaalyahannada Waterdeep waa habka asalka ah ee lagu soo galo heerarka marka kamaraddu u dhaqaaqdo mid ka mid ah miisaska Aaway geesiyaasheenii oo markaa fursad u siiya madadaalo yar oo khariidada ah. Taabasho asal ah oo aan jeclaan lahayn inaan inbadan ka aragno ciyaar u barooranaysa shaqo badan iyo taabashadaas gaarka ah ee ka farxin doonta taageerayaasha Dungeon & Dragons.
Farsamo ahaan si fiican ayaa loo shaqeeyey, in kastoo ayaa ka maqan bartaas gaarka ah ee animations iyo saamaynta. Oo bal fiiri, waxaan helnaa madax waaweyn oo kama-dambeys ah, laakiin iyagu intaas way sii dheereynayaan intaas; Dhanka kale, looma fahmi karo inay naga kharash yar tahay inaan ka guuleysano tababaraha ugu dambeeya ee kama dambeysta ah. Waxay noqon doontaa inay sixir fureen wax liitana uusan waxbadan siinaynin ...
Dagaalyahannada Waterdeep ayaa hal talaabo u jira inay ka sii fiicnaadaan, in kastoo aysan u waayi doonin taageerayaal, maadaama si guud marka loo eego ay aad u fiican tahay. Laakiin maxaa la yiri, qaadashada sumaddaas D&D waxay leedahay mid iyada u gaar ah waana cadaadis aysan awoodin inay cabbiraan markay ka furayaan Android.
Ahaanshaha Dungeon & Dragons
Miyuu taabanayaa daqiiqado yar
Waxaa ka dhiman waxqabad dheeri ah iyo saameyn gaar ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Dagaalyahannada Waterdeep a Dungeon & Dragons laakiin way ka fogaanayaan
Sida loo dejiyo telefoonka xiriirka degdega ah ee ku saabsan Android